Ahoana ny fomba fampidirana mailaka amin'ny varotra Multi-Channel | Martech Zone
Talata, Janoary 8, 2013 Talata, Janoary 8, 2013 Jenn Lisak Golding
Amin'izao vanim-potoana izao, ny marketing dia misy lafiny maro. Manomboka amin'ny bilaogy ka hatrany amin'ny haino aman-jery sosialy ka hatrany amin'ny infografika mankany amin'ny mailaka dia zava-dehibe ny fampandehanana sy fampidirana hafatra rehetra amintsika. Hitanay nandritra ny taona maro fa ny mailaka no ivon'ny marketing amin'ny fantsona marobe.
Niara-niasa tamin'ny namantsika tao Delivra izahay mba hamoronana an'ity sary ity momba ny fomba hanampian'ny mailaka ny mpivarotra hanamafy sy hiaro ny hafatra amin'ny marketing. Fantatrao ve fa 75% amin'ireo mpampiasa haino aman-jery sosialy no mihevitra ny mailaka ho hafatra mifandraika amin'izy ireo amin'ny orinasa? Goavana izany. Ny mailaka dia varotra miorina amin'ny fahazoan-dàlana, izay midika fa ny mpanjifa na ny vinavin-dahatra dia afaka manapa-kevitra ny hiroso amin'ny fe-potoana manokana. Ny fampiasana an'ity fitaovana ity amin'ny fomba mety dia afaka manatsara be ny fiovam-po, indrindra rehefa mamela ny prospect haka sy hisafidy ny fomba tian'izy ireo hirotsahana.
Fanamby amin'ny marketing amin'ny mailaka
Iray amin'ireo fanamby hatrehinay ny manaraka ny marketing mailaka anay. Nanana hiatus marketing amin'ny mailaka tamin'ity taona ity izahay niaraka tamin'ny fandaharam-potoananay be atao, saingy vao avy nandefa azy ireo indray izahay. Ny lakilen'ny marketing amin'ny mailaka dia ny fanananao andro sy fotoana manokana handefasanao ny mailakao. Alaharo ny fotoana ao amin'ny kalandrie mba hahazoana antoka fa nahavita ny atiny sy ny endrinao ho an'ny fampielezan-kevitra amin'ny mailaka ianao amin'ity herinandro ity. Mamorona tetiandro atiny, lohahevitra ho an'ny mailakao ary fomba hanatsarana ny mailakao. Mahatonga any amin'ny hetsika ny fandaminana.
Raha tsy mampiasa marketing amin'ny mailaka ianao dia tokony hojerenao tsara ny tsindry sy ny fifampiraharahana mety ho very. Eritrereto izany - ny ankamaroan'ny olona dia manamarina ny mailaka isan'andro sy isan'andro. Maninona ianao no tsy mampiasa marketing amin'ny mailaka? Ahoana no ahafahanao mampiasa marketing amin'ny mailaka? Ireto misy fanontaniana vitsivitsy tokony apetrakao amin'ny tenanao amin'ny maha fikambanana anao.
Ahoana ny fampiasanao ny mailaka amin'ireo hetsika marketing misy fantsona marobe?
Tags: marketing amin'ny fampielezan-kevitrafampielezan-kevitramailaka MarketingMarketing Infographicsmarketing amin'ny fantsona marobe
9 Jan 2013 amin'ny 7:26 PM
Misaotra nandefa an'ity Jenn!
Jan 22, 2013 ao amin'ny 8: 29 AM
Infographic tsara, saingy hiteny aho fa ny mailaka dia fantsona amin'ny azy manokana, ary ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa no mampifamatotra ireo fantsona.